Nepali Rajneeti | भोट दिनेबेला नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो?
भोट दिनेबेला नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो?
फागुण १२, २०७७ बुधबार २१२४ पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही गरेन भनेर विरोध गर्नेहरूले नै अहिले कांग्रेसलाई खोजिरहेको बताएका छन्।
कांग्रेसले केही गर्दैन भनेर विरोध गरिरहेकाहरू अहिले कांग्रेसलाई खोज्न थालेको देउवा बताउँछन्। कांग्रेसबाट केही आशा गर्नु राम्रो पक्ष भएको देउवाको भनाइ छ।
महेन्द्रनारायण निधिको ९९ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंमा बुधबार भएको विचार गोष्ठीमा देउवाले भने, ‘भोट दिने बेला कांग्रेसलाई नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो?’
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ६३ सांसद छन्।
उनले मानिसहरूले कांग्रेसलाई खोजिरहेको पनि बताए। जनता, वुद्धिजीविहरू र पत्रकारले कांग्रेस कता छ भनेर खोजेकोले उनले धन्यबादसमेत दिए।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अन्तरिम आदेश नदिएकोले आफूले पुनर्स्थापना र चुनाव दुबै जे भए पनि स्वीकार गर्छौं भनेको देउवाको भनाइ छ।
‘सर्वोच्चले स्टे अडर देला भनेको दिएन। त्यसपछि के होला के होला भन्ने लाग्यो मलाई। शंका थियो। त्यही भएर मैले पुनर्स्थापना र चुनाव जे भए पनि स्वीकार गर्ने बताएको हुँ,’ देउवाले भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला सामान्य हाे लड्डु खानै पर्ने के छ र ? : ओली